फ्रेवुअरी 8, 2018 फ्रेवुअरी 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments आविष्कार, चोर, यन्त्र, रुकुम
रासस, २५ माघ, रुकुम । सामान्य गाउँको परिवारमा जन्मेका रुकुम पश्चिमका एक विद्यार्थीले घरमा चोर पसेको सूचना दिने यन्त्र आविष्कार गरेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिका-११ भलाक्चाका २१ वर्षीय वसन्त वलीले कोठामा कोही प्रवेश गयो भने थाहा पाउने सेक्युरिटी सिस्टम नामको यन्त्र आविष्कार गरेका हुन् ।
हाल दाङको पद्मोदय नमूना माध्यमिक विद्यालयमा इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत ओलीले यस्तो यन्त्र आविष्कार गरेपछि जिल्लामा उहाँको निकै चर्चा चलिरहेको छ । वलीले योसँगै अन्य विभिन्न ३० वटा उपकरण पनि बनाएको बताए ।
उनले बनाएका केही उपकरण बिक्रीका लागिसमेत बजारमा आइसकेका छन् । ‘मैले बनाएको सबैभन्दा राम्रो उपकरण सेक्युरिटी सिस्टम हो,’ २१ वर्षे वलीले भने, ‘यसमा पहिले नै मोबाइल नम्बर सेट गरिएको हुन्छ, कोठामा कोही प्रवेश गयो भने मोसन र हिटका आधारमा मेसिनले जुन व्यक्तिको फोन नम्बर सेट गरिएको हुन्छ, त्यसमा फोन गर्छ ।
सम्बन्धित व्यक्तिले फोन उठाएपछि कोठाभित्र भइरहेको गतिविधिको आवाजसमेत सुन्न सकिने उनले बताए । रातिको समयमा पसल, घर, कार्यालयलगायतका ठाउँमा हुने चोरीको सूचना दिन यो उपकरण सहयोगी बन्ने विश्वाससहित आफूले उपकरण तयार पारेको वलीको भनाइ छ । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन निरन्तर मेहनत गरिरहेको उनले बताए ।
← जनमत सर्वेक्षण – डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वारजको नेपाल भ्रमण बेमौसमी भएको बताउनुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
घुँडा नटेकौ कसैका सामु →
नयाँ शक्ति पार्टीको स्थानीय तह चुनावको प्रतिवद्धतापत्र (पूर्णपाठसहित)
मे 2, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0
जुलाई 20, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0